05 Jolay 2020 - FJKM Québec - Canada
05 Jolay 2020
5 juillet 2020 by FJKM-QUEBEC
ISAIA 51 : 9-11
51:9 Mifohaza, mifohaza, ry sandrin’i Jehovah, mitafia hery!Mifohaza tahaka ny tamin’ny andro fahiny!Dia tamin’ny taranaka lasa ela.Tsy Ianao va Ilay nitetitetika an’i Rahaba sy nitomboka ny dragonay
51:10 Tsy Ianao va Ilay nahamaina ny ranomasina,dia ny rano ao amin’ny lalina indrindra,ka nanao ny ranomasina lalina ho lalana halehan’ny navotanay
51:11 Eny, ny navotan’i Jehovah hiverinaka hankany Ziona amin’ny fihobiana,ary ny fifaliana mandrakizay no ho eny an-dohany;hahazo fifaliana sy faharavoravoana izy,ka dia handositra ny alahelo sy ny fisentoana.
« Mifohaza , mifohaza ry sandrin’i Jehovah , mitafia hery… » ireo andianteny ireo dia milaza ny herin’i Jehovah , hery tsy hay tohaina , hery tsy miova ary hery azo ianteherana. Koa izany indrindra no mahatonga ny vahoakan’ Andriamanitra miantoraka aminy sy miandrandra ny heriny hanafaka azy ireo .
« Tsy ianao va ilay nahamaina ny ranomasina … ». Tsy zavatra vao andramana akory ny herin’i Jehovah fa efa nasehony teo amin’ny tantara , ary efa niharihary tamin’ny fitondrany ny fiainan ‘ireto vahoakany ireto hatramin’ny fahiny .Tsy miantoraka amin-kazo tsy fantatra akory araka izany ny olony .Tsy diso làlana ianao raha mitoky amin’ny herin’i Jehovah.
« Eny , ny navotan’iJehovah hiverina ka hankany Ziona amin’ny fihobiana… ». Noho ireo antony roa voalaza teo ambony dia mahazo toky ary feno fanantenana ireto vahoaka babo ireto fa mahavotra azy ireo i Jehovah ary hitondra azy ireo hiverinz any amin’ny taniny , dia ilay tany efa nianianan’iJehovah tamin’ny razany fa omeny ho lovany . Ny toloko sy alahelon’ny olona lavitra an’i Jerosalema dia fantany fa hain’ Andriamanitra aravona ka hody fifaliana sy fihobiana satria Andriamanitra mahery Jehovah . Azo antoka ny heriny , mahagaga ny efa vitany ary tsy miova Izy . Ary moa va tsy fanavotana tahaka izany no nataon’i Jesoa hanafaka antsika amin’ny fahotana ?